Wenza njani amehlo aluhlaza-yeyiphi imibala endiyithandayo? | IBezzia
USusana godoy | 08/06/2021 14:00 | makeup
Ngaba uyazi ukwenza amehlo aluhlaza? Zezinye zeyona nkangeleko inkanuko kunye nothando. Kuyinyani ukuba ngaphakathi kuyo, sinokufumana imibala eyahlukeneyo eluhlaza, kodwa ke sikushiya nezona ngcebiso zibalaseleyo ukuze amehlo akho aqinise nangakumbi.
Ukuba ubona ukuba uyazama kodwa awufumani siphumo silindelekileyo, Siza kukunika ezona zimvo zibalaseleyo ukuze ufumane okuninzi kwinkangeleko yakho. I-Makeup ihlala ingumlingani wethu osenyongweni kuwo onke amaxesha emini nasebusuku nokusinceda ukuba siqinise into esiyifunayo kunye nokufihla esingakwenziyo. Masihle siye kwishishini!
1 Uyenza njani iliso eliluhlaza inyathelo ngenyathelo
2 Nguwuphi umbala we-eyeliner wamehlo aluhlaza
3 Imibala yethunzi eliluhlaza
4 Indlela yokwenza amehlo aluhlaza epatini
Uyenza njani iliso eliluhlaza inyathelo ngenyathelo
Ukwenziwa kwamehlo kuhlala kuyenye yeenkqubo esithanda ukuzenza. Kodwa kuyinyani ukuba ayisoloko ilingana njengoko besiphupha njalo. Kule meko, siza kukushiya inyathelo ngenyathelo eliza kukuthatha ixesha elincinci, ke, masisebenze!
Ukulungiselela ulusu kubalulekile. Ke ngoko, khumbula ukufaka into yokuthambisa ebusweni bakho nasemva kwayo, isiseko osikhethileyo okanye uthambise umsitho. Xa kuziwa kwinkophe, kukho ezinye izinto zokuqala ezifanelekileyo kwizithunzi ukuba zithathe umbala ongaphezulu kwaye zihlale ixesha elide.
Ngoku kufuneka Khetha ubuncinci i-shades ezimbini zombala ofanayo wesithunzi. Okona kukhanya kuya kudlula kuyo yonke inkophe yeselfowuni kwaye siya kufiphala kakuhle.
Ngombala omnyama siya kuwunika ubunzulu ngakumbi ukugxininisa ukuphela kweliso oya ngasetempileni kwaye ayisebenzise kwinxalenye yesibaya. Kodwa ewe, kule ndawo yokugqibela sizakuyi-blur ukuze kungabikho migca.
Ukusondela kwethu ekukhaleni, umbala uya kuba lula, ke siyayeka ukuba ibe qatha ngakumbi kokunye ukugqithisa esikukhankanyileyo.
Xa usebenzisa izithunzi, lixesha lokuba khetha i-eyeliner. Ingaba yipensile okanye i-liquid kwaye kunye nayo siya kutsala umgca ophezulu, kufuphi ne-eyelashes.
Kwinxalenye yeinyembezi siza kunika umnxeba wesikhanyisi. Incinci kakhulu, inqaku nje elincinci ukuze iliso lethu likhanyise kabini.
Ekugqibeleni, akukho nto ifana nokufaka imascara encinci ukunika ivolumu engaphezulu kwiliso.
Nguwuphi umbala we-eyeliner wamehlo aluhlaza
Njenge-eyeliner, sele uyazi ukuba ungayifumana zombini ngohlobo lwepensile, ulwelo okanye ijeli. Kuyinyani ukuba kufuneka sihlale silandela intuthuzelo yethu. Nangona ijeli kuya kusoloko kufuneka siyifiphaze kancinci ukuze ingaphawulwa. Kodwa loo nto sele inomdla wonke umntu. Into oyenzayo kukuba uhlale nemibala evelele kakhulu ukwazi indlela yokwenza amehlo aluhlaza.
Umbala omnyama uya kuwunika amandla kwaye ugqibelele ukuba ukhethe i 'Smokey Eyes'. Isitayile esitshayayo esiya kuba yinkwenkwezi yobusuku bakho obuhle kunye neziganeko ezibalulekileyo. Ngelixa ufuna ubume bendalo obungakumbi, unokuhlala ukhetha i eyeliner eluhlaza egxininisa ukujonga. Omnye wemibala ye-eyeliner ongayiphosiyo imdaka. Iiblues okanye iithowuni ezingwevu azikhuthazwa.
Imibala yethunzi eliluhlaza
Wenza njani amehlo aluhlaza kwaye zeziphi izithunzi ezifanelekileyo kubo? Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye uzibuzile oku, kulungile, siya kukuxelela ukuba kuyinyani ukuba lo mbala wamehlo unokuthwala imibala eyahlukeneyo kunye neetoni. Kodwa sifuna ukuba bakhanye ngakumbi kwaye ngenxa yeso sizathu, akukho nto iithoni zegolide, apho browns ukuya yenye yeengcinga ezinkulu zamehlo akho. Kodwa i-pinki yenye yezona zinto zidibeneyo kunye nemfusa. Kodwa kuyinyani ukuba le yokugqibela ihlala isemilebeni yomntu wonke. Ayisiyo kuba ayilo toni egqibeleleyo kodwa kuba kunzima ukuyidibanisa ngendlela yendalo.
Indlela yokwenza amehlo aluhlaza epatini
Uya kufaka isicelo isithunzi esimnyama ngwevu kuyo yonke ijwabu leso.
Unokwenza umahluko nge umthunzi wombala we-aubergine okanye ungwevu mnyama. Oku kuyokuya kwikona engaphandle yamehlo kwaye kuye kufikelela embindini wawo, kuyiphazamise kakuhle.
Ukusuka embindini wenkophe ngakwicala le-lacrimal, umbala uyacaca kwakhona. Ngomnxeba wesikhanyisi kwindawo efanelekileyo yokukhala.
Dlulisa ibrashi ecocekileyo ukuze udibanise yonke inkophe kakuhle, uthintele ii-creases.
Umgca onomthunzi omnyama kwaye usebenzise mascara.
Ngoku uyazi indlela yokwenza amehlo aluhlaza ukuze uyiqwalasele kwiintlanganiso zakho ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » makeup » Indlela yokwenza amehlo aluhlaza